Ọrụ Ebube Mbụ Jizọs Rụrụ | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
AGBAMAKWỤKWỌ E MERE NA KENA
JIZỌS EMEE MMIRI YA AGHỌỌ MMANYA
O meela abalị atọ ugbu a kemgbe Nataniel ghọchara onye na-eso ụzọ Jizọs. O so ná ndị mbụ ghọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs. Jizọs na ụfọdụ n’ime ndị mbụ a ghọrọ ndị na-eso ụzọ ya gawara Galili nke dị n’ebe ugwu, bụ́ ebe ha niile si. Ha na-aga Kena, bụ́ obodo Nataniel si. Obodo Kena dị n’ebe ugwu Nazaret, ebe Jizọs nọ tolite. A kpọrọ ha oriri agbamakwụkwọ na Kena.
Meri nne Jizọs bịakwara agbamakwụkwọ ahụ. Ọ bụ enyi ndị ezinụlọ ahụ na-agba akwụkwọ. O yikwara ka ò so na-enyere ha aka ịhụ na e lekọtara ndị bịara agbamakwụkwọ ahụ. Ọ bụ ya mere o ji chọpụta ngwa ngwa na mmanya agwụwala ma gwa Jizọs, sị: “Ha enweghị mmanya.”—Jọn 2:3.
Ihe ọ pụtara bụ na Meri nọ na-agwa Jizọs ka o mee ihe banyere mmanya ahụ gwụwaralanụ. Jizọs gwara ya ihe gosiri na ya achọghị ka ọ bụrụ ya ga na-agwa ya ihe ọ ga-eme. Ọ sịrị ya: “Nwaanyị, gịnị jikọrọ mụ na gị?” (Jọn 2:4) Ebe ọ bụ na Jizọs bụ Eze Chineke họpụtara, ọ bụ Nna ya nke eluigwe kwesịrị ịna-agwa ya ihe ọ ga-eme, ọ bụghị ndị ezinụlọ ya ma ọ bụ ndị enyi ya. N’ihi ya, Meri mere ka nwaanyị ma ihe. Ọ hapụụrụ nwa ya nwoke okwu ahụ ma gwa ndị na-eke nri, sị: “Ihe ọ bụla ọ gwara unu, meenụ ya.”—Jọn 2:5.
E nwere ite mmiri isii dị ebe ahụ. Ite nke ọ bụla nwekwara ike ịba ihe karịrị lita mmiri iri anọ. Jizọs gwara ndị ahụ na-eke nri, sị: “Gbajuonụ mmiri n’ite mmiri ndị ahụ.” Mgbe ha gbajuchara ha, Jizọs sịrị ha: “Ugbu a, kutenụ ya bugaara onye nhazi oriri.”—Jọn 2:7, 8.
Mmanya ahụ tọrọ onye na-ahazi oriri ahụ ezigbo ụtọ. Mana, ọ maghị na e si n’ụzọ ọrụ ebube mepụta ya. Ọ kpọrọ nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ sị ya: “Ndị ọzọ na-ebu ụzọ ebupụta mmanya dị mma, mgbe mmanya gbuwere ndị mmadụ, a na-ebupụta nke na-adịchaghị mma. I debere mmanya dị mma ruo ugbu a.”—Jọn 2:10.
Ihe a bụ ọrụ ebube mbụ Jizọs rụrụ. Mgbe ndị mbụ a na-eso ụzọ ya hụrụ ọrụ ebube a, o mere ka okwukwe ha nwere n’ebe ọ nọ sikwuo ike. Jizọs na nne ya na ụmụnne ya ndị nwoke mechara gawa obodo Kapaniọm, nke dị n’ụsọ Oké Osimiri Galili.
N’oge ozi Jizọs, ole mgbe ka e nwere agbamakwụkwọ ahụ na Kena?
Olee otú Jizọs si zaghachi nne ya mgbe ọ gwara ya banyere mmanya?
Olee ọrụ ebube Jizọs rụrụ, oleekwa otú ọrụ ebube ahụ dị ndị ọzọ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Arụọ Ọrụ Ebube Mbụ Ya
jy isi 15 p. 40-41